FJKM Ankadifotsy 5mn: 23 jona 2013 / SA / Fampianarana / Accueil - FJKM Ankadifotsy
5mn: 23 jona 201309/07/2013 07:32
45 taona lasa izay dia nisy zava-niseho teto Madagasikara, inona moa izay rankizy ? tsy misy mahalàla ve ? ankalazaintska amin’ity volana jona ity izay. 45 taona izay no niorina ny fiangonana FJKM. Inona moa Rankizy no tena iorenan’izany fiangonana FJKM izany ? ny finoana an’Andriamanitra Ray sy JEsoa Kristy ary ny Fanahy Masina. Ary zavatra 3 lehibe no mitoetra eo amin’ny fiangonana tena kristiana: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana
45 taona lasa izay dia nisy zava-niseho teto Madagasikara, inona moa izay rankizy ? tsy misy mahalàla ve ? ankalazaintska amin’ity volana jona ity izay. 45 taona izay no niorina ny fiangonana FJKM.
Inona moa Rankizy no tena iorenan’izany fiangonana FJKM izany ? ny finoana an’Andriamanitra Ray sy JEsoa Kristy ary ny Fanahy Masina. Ary zavatra 3 lehibe no mitoetra eo amin’ny fiangonana tena kristiana: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Ny asa ataon’ny fiangonana rankizy dia mitory ny filazantsara. Ny tanjon’ny fiangonana ny fiainana mandrakizay ho an’ny olona tsirairay. 3 koa izay zavatra izay an! Tsara ve sa ratsy izany? “tsara”
Fa izao koa an! 55 taona lasa zay, nisy namorona izany sovaly telo izany. Misy zavatra 3 loha nafafin’izany sovaly 3 izany teto amin’ny firenentsika dia: fanenenana, fifandirana,fandratrana, soa ve izany? “tsy soa” hoy ny ankizy, kanefa dia tenenina fona isan’andro fa hoe “soa ny fiarahantsika”.
Ao amin’ny diksionera rankizy ny dikan’ny teny hoe: bièrre ankoatry ny maha rano fisotro azy dia vatapaty no dikany, raha mamaky ny ohabolana 31:6 koa dia milaza hoe: “omeo an’izay efa ho faty ny divay” na ny “toaka” ao amin’ny DIEM. Ny soa indrindra anefa rankizy dia ny fanànana ny fiainana fa tsy fahafatesana dia ny fiainana mandrakizay. Mankalaza ny fetim-pirenena koa isika, tanindrazana, fahafahana, fandrosoana no tarigetra, anjarantsika no mijery hoe: nisy ve ny fandrosoana sy ny fahafahana raha izany zavatra ratsy izany no niainantsika teto? Anefa mino isika fa niasa koa Andriamanitra nandritra izany.
Nisy evanjelistra anakiray nitaona ny Ray aman-dreny hampianatra ny zanany sekoly alahady sy hanao batisa azy ireo. Nisy rangahy iray nilaza hoe: ny ahy ny zanako tsy mba ataoko an’izany satria ny ankizy izao tokony omena fahafahana fa rehefa lehibe izy manapakevitra. “ho entiko any amin’ny zaridaina tsara tarehy iray ianao anio “hoy ilay evanjelistra tamin’ilay rangahy. Gaga ilay rangaha rehefa tonga teo: “izao ve no lazainao fa zaridaina tsarabe nefa dia ahi-dratsy fotsiny no maniry aminy?” ka ny ahi-dratsy anie no mivelona amin’ny fahalalahana e! koa raha tsy esorina amin’ny fakany ireo ahi-dratsy dia tsy ho tsara ilay zaridaina, izay ilay omena fahalalahana lazainao hoy ilay evanjelistra. Mila hongotana ny ahi-dratsy! izany no ataontsika aty amin’ny sekoly alahady rankizy, manàla ny ahi-dratsy dia ny toetra ratsy mba ho zaridaina tsara sy mahafinaritra isika.